420s Zaytoven &amp; Quavo See Studio Site na Onye Mmepụta na-emeri Genius x Mkpụrụ site na ™kwụ ™ images and subtitles
Yo ihe bụ nwoke, ọ bụ Zaytoven, ma abịara m ebe a izute onye mmeri nke Mkpụrụ Site Asọmpi nke ụkwụ na nke Genius Studio Sition. Ndị na-emepụta ihe si mba niile gbagwojuru beats na-eji ụda mmụọ nke mkpụrụ osisi sitere na ụkwụ. Ka a pụọ lelee ya. Masta Fero. Olee otú ị na-eme nwoke? Esi m Denver, Colorado, amụrụ ma zụlite. Kedu ụdị egwu a na-eme na Denver? Ọ bụ mara mma dị obere enwerela ọtụtụ ọdịnala. Yabụ kedu ihe ị banyere n’ime Mkpụrụ Site N'ịga ụkwụ Studio Studio. Ana m eme amia ihe etu a ka odi m ka odi na-ejide gị ma ọ bụrụ na ịnọghị ya, ịmara na ị ga-amali elu ma were ebe ahụ ohere. Nọrọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ị nwetara ndị enyi yana ihe niile wee nwezie mmasị ha na egwu egwu, obu odi ka odi ka ha na ha no. Ee, ndị ụfọdụ nke ụmụ nwoke ị lere anya ịmụpụta? Ana m ekwu na Dr. Dre bụ ikekwe nke mbụ, ị n'ezie. Ewoo, emela nke ahụ, Mba ịgba nkịtị. Nke ahụ bụ ihe dị elu. Pharrell. M na-ekwu Dre na Timbaland na ihe ndị ahụ dịkwa m ka egere m ntị. Dr. Dre Dre Day I cheta nwannem nwoke ka o na akpo ya egwu ka m ge nti ya ma onye ije. M gere ntị nke ukwuu na ị listeninga ntị naanị n'ihi ụda na otu o siri chee. Ọ bụ ya mere m ga - eji kwuo na Dr. Dre kwadoro ọdịmma m n'ihi na m dị ka m iwebata maka egwu rap. Yabụ kedu ihe ị malitere? Ọ dị mma na m na-aga na loops niile ihe niile ma achọtazie m nke a masịrị m: ndị na-agwakọta ekpomeekpo akaghị. Na oge na ihe niile ọ na-eme ka m na-akwado ya. Etubere m ya, edebekwara m oge ahụ na ihe niile. Ọ dị mma Amalitere m iwu ebe ahụ. Rewfọdụ tufuo na ọnyà na ihe niile. Yabụ nke ahụ na-aga, yabụ m na-atụba ụfọdụ okpu n'ime ebe ahụ na ị ma ama ma ihe niile. Yabụ mgbe ị gbakwụnyere ndị nọ na ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ gbaa foto ahụ na-akụ nke ọma mere. Ee ọ na-eme ya oge ọ bụla. Ee Anyị bido tinye ha n'ọnyà, kụọ aka onye ọ bụla n'ime ụlọ dịka dịkwa mma ee ọ bụ ya ugbu a. Mgbe ahụ ọ bụ ebe a ka m, m nọ na-eche dịka ị maara Eleghị anya mmadụ niile ga-eji otu ụda ma aga-amasị m ịme ihe ọkụkụ, ana m eme ya dika i ma egwu ato n’otu uzo. Na otu. Anyi echere m, ị maara, ịgbanwe ya Berry gaa na Berry Tie Dye loop. Knowmata na m gbara ya ka ọ dabara iji merie m ma mu onwem bu kwa ya. N’aka nri Achọghị m ịgbanwe ọtụtụ ihe. Yabụghị m agbanweghị drum ma ọ bụ 808 ma ọ bụ nothin dị ka nke a ka m tinyere ya otu na otu ihe. Otu ilu udaah. Ma otu ihe ikpeazu. Ọ bụghị ihe egwu Masta Fero na-enweghị akara Masta Fero. I kwesiri itinye nkpado n’ime. Onye bu masta? Olee otu i siri bia? Ihe nkiri kacha amasị m bụ Egwuregwu Ikpeazụ. M ziri ezi na-aga Iwas na-ele dragọn Ikpeazụ ụbọchị abụọ gara aga. Ihe nkiri kacha amasị m Onye bu onye nwe ya. Ee ee. Yabụ na nke ahụ mara mma. Gosi ya Enwetara m onye m chere n’ezie chọrọ nyocha nke a ugbu a. A bụ m kpọọ otu n’ime bros m. Kedu ihe bụ Huncho? Kedu nke na-eme? Ebe ị nọ? Anọ m na studio. Nwoke ị maara na m nọ na ụlọ nyocha. Ok, lee, mụ na nwoke mmeri, Masta Fero nọdụrụ n’ebe a. Kedu ihe bụ nwoke? Kedu kwanụ nwanne? Gịnị bụ Quay? Ọ na-aga ike. Gị na nnukwu nkịta ugbu a. Kelee mmadụ. Mba onye mere ihe a mere, achọrọ m ka ị lelee ya. Ọ na-aga isi ike, n'agbanyeghị eziokwu na-ada ka ihe ị ga-echigharị. Anọ m na studio ugbu a, esokwala m. Ọ bụrụ na ọ siri oke ike. Kpamkpam na-aga ara. Ọ dịghị nke ahụ siri ike. Ihe ahu nwere ike ime Culture III. Ọ dịghị anyị na ya. Aga m etinye ya ọnụ. Ee onye nwe, nwoke. Ekele diri mmeri nke Mkpụrụ Site The Studio Studio S mutum n'ezie. Jiri nke ahụ kpọrọ ihe. Gi na nkita di nkpa. Nọgide na-aga, na-egweri. Mee uche gị. Nọgide na-esi nri. Gị n'ụzọ. Ight Quay. Crazy adịghịdị adị n'ezie. Kedụ ụzọ kacha mma onye nrụpụta nwere ike isi nwee ogologo ndụ na ụlọ ọrụ? Dị ka onye na-emeputa ụda pụrụ iche dị egwu bụ ihe na-eke ogologo ndụ. Eleghị anya ị debanye ndị nrụpụta iri n'ime ebe a, n'ime ụlọ a, ma mechie anya gị ma bido igha egwu maka ndị ọrụ iri iri a niile. Ndị ahụ ị na-eti Zaytoven ihe ị ga-enwe ike ikwu ozugbo na nwoke ahụ bụ ihe Zaytoven kụrụ. Ndi mmadu ajuju: dang Zaytoven ihe m gha eme banye na egwuregwu? Know maara ihe ndị ọ dị m mkpa iwere? ”Ana m ekwu nwoke mgbe niile ị ga-enweta onye omenkà. Dị ka ọ bụrụ na ọ bụghị maka Gucci ọfụfụ, mgbe ahụ Zaytoven ikekwe bụrụ nke na-agaghị enwe isi ihe ọ bụla. Yabụ, ozugbo ị nwetara otu omenkà ihe ahụ know marala na Y’all nwetara kemịkalụ na ụda ọnụ, ị maara otu oge ọ ga -ada ma ọ bụ otu oge onye na-ese ihe amalite. Ọbụna a ga-amata onye omenkà ahụ O doro anya. ọ ga-abụ ụda nke ị mepụtara. Gini mere i ji di elu oru ngo a maka nkpuru Site na The Studio Studio Sessions? Ọ na-adị m ka gị mara na m bụ onye nrụpụta nke ndị na - emepụta ihe ndị ọzọ na - ele anya na ị maara, na lelee anya, ọ na - adịkwa m mgbe niile ka m chọrọ ịbụ onye ndụmọdụ, ị maara ihe m na - ekwu, na gosi nkwado maka ndị na - eme ihe na - abịa. Dịka m nọ ebe a nwoke a chọrọ m ịbụ onye ị maara m nnukwu bro nye ndi mmadu na acho ime ya na egwuregwu gi. Yabụ oge ọ bụla ihe dị ka nke a na-abịa nwoke, M n'ezie na ị maara 100% na. Gee ntị na nri ahụ enwere dope, ị nwetara m na ọnọdụ m ịchọrọ ịme ụfọdụ egwu nwoke. Ka anyị sie nri. N'ezie. Ka anyị gaa ihe. Ka anyị mee ya.
Zaytoven &amp; Quavo See Studio Site na Onye Mmepụta na-emeri Genius x Mkpụrụ site na ™kwụ ™
< start="1.32" dur="3.18"> Yo ihe bụ nwoke, ọ bụ Zaytoven, ma abịara m ebe a izute onye mmeri nke Mkpụrụ Site >
< start="4.5" dur="3.87"> Asọmpi nke ụkwụ na nke Genius Studio Sition. Ndị na-emepụta ihe si mba niile >
< start="8.37" dur="5.25"> gbagwojuru beats na-eji ụda mmụọ nke mkpụrụ osisi sitere na ụkwụ. Ka a pụọ >
< start="13.62" dur="1.54"> lelee ya. >
< start="25.14" dur="2"> Masta Fero. Olee otú ị na-eme nwoke? >
< start="30.74" dur="3.9"> Esi m Denver, Colorado, amụrụ ma zụlite. Kedu ụdị egwu a na-eme na Denver? Ọ bụ >
< start="34.649" dur="4.441"> mara mma dị obere enwerela ọtụtụ ọdịnala. Yabụ kedu ihe ị banyere n’ime >
< start="39.09" dur="5.1"> Mkpụrụ Site N'ịga ụkwụ Studio Studio. Ana m eme amia ihe etu a ka odi m ka odi >
< start="44.19" dur="3.15"> na-ejide gị ma ọ bụrụ na ịnọghị ya, ịmara na ị ga-amali elu ma were ebe ahụ >
< start="47.34" dur="4.14"> ohere. Nọrọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ị nwetara ndị enyi yana ihe niile wee nwezie mmasị >
< start="51.48" dur="3.719"> ha na egwu egwu, obu odi ka odi ka ha na ha no. Ee, ndị ụfọdụ >
< start="55.199" dur="5.25"> nke ụmụ nwoke ị lere anya ịmụpụta? Ana m ekwu na Dr. Dre bụ ikekwe nke mbụ, ị >
< start="60.449" dur="7.831"> n'ezie. Ewoo, emela nke ahụ, Mba ịgba nkịtị. Nke ahụ bụ ihe dị elu. Pharrell. M na-ekwu >
< start="68.28" dur="4.17"> Dre na Timbaland na ihe ndị ahụ dịkwa m ka egere m ntị. Dr. Dre Dre Day I >
< start="72.45" dur="3.989"> cheta nwannem nwoke ka o na akpo ya egwu ka m ge nti ya ma onye ije. >
< start="76.439" dur="4.11"> M gere ntị nke ukwuu na ị listeninga ntị naanị n'ihi ụda >
< start="80.549" dur="3.36"> na otu o siri chee. Ọ bụ ya mere m ga - eji kwuo na Dr. Dre kwadoro ọdịmma m n'ihi na m >
< start="83.909" dur="2.151"> dị ka m iwebata maka egwu rap. >
< start="97.04" dur="2.759"> Yabụ kedu ihe ị malitere? Ọ dị mma na m na-aga na loops niile >
< start="99.8" dur="3.36"> ihe niile ma achọtazie m nke a masịrị m: ndị na-agwakọta ekpomeekpo >
< start="103.16" dur="1.08"> akaghị. >
< start="112.66" dur="2.26"> Na oge na ihe niile ọ na-eme ka m na-akwado ya. >
< start="114.92" dur="3.34"> Etubere m ya, edebekwara m oge ahụ na ihe niile. Ọ dị mma >
< start="122.2" dur="4.92"> Amalitere m iwu ebe ahụ. Rewfọdụ tufuo na ọnyà na ihe niile. >
< start="133.52" dur="3.719"> Yabụ nke ahụ na-aga, yabụ m na-atụba ụfọdụ okpu n'ime ebe ahụ na ị ma ama ma >
< start="137.24" dur="1.32"> ihe niile. >
< start="144.62" dur="2.759"> Yabụ mgbe ị gbakwụnyere ndị nọ na ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ gbaa foto ahụ >
< start="147.379" dur="3.06"> na-akụ nke ọma mere. Ee ọ na-eme ya oge ọ bụla. Ee >
< start="150.439" dur="3.33"> Anyị bido tinye ha n'ọnyà, kụọ aka onye ọ bụla n'ime ụlọ dịka dịkwa mma ee >
< start="153.769" dur="3.741"> ọ bụ ya ugbu a. Mgbe ahụ ọ bụ ebe a ka m, m nọ na-eche dịka ị maara >
< start="157.51" dur="4.42"> Eleghị anya mmadụ niile ga-eji otu ụda ma aga-amasị m ịme ihe ọkụkụ, ana m eme ya >
< start="161.93" dur="6.01"> dika i ma egwu ato n’otu uzo. Na otu. Anyi echere m, ị maara, ịgbanwe ya >
< start="167.96" dur="3"> Berry gaa na Berry Tie Dye loop. >
< start="178.52" dur="2"> Knowmata na m gbara ya ka ọ dabara iji merie m >
< start="180.52" dur="3.2"> ma mu onwem bu kwa ya. N’aka nri >
< start="189.04" dur="4.5"> Achọghị m ịgbanwe ọtụtụ ihe. Yabụghị m agbanweghị drum ma ọ bụ 808 ma ọ bụ nothin dị ka nke a ka m tinyere ya >
< start="193.54" dur="3.62"> otu na otu ihe. Otu ilu udaah. >
< start="204.86" dur="4.34"> Ma otu ihe ikpeazu. Ọ bụghị ihe egwu Masta Fero na-enweghị akara Masta Fero. >
< start="209.2" dur="1.42"> I kwesiri itinye nkpado n’ime. >
< start="213.1" dur="5.22"> Onye bu masta? Olee otu i siri bia? Ihe nkiri kacha amasị m bụ Egwuregwu Ikpeazụ. >
< start="218.329" dur="3.181"> M ziri ezi na-aga Iwas na-ele dragọn Ikpeazụ ụbọchị abụọ gara aga. Ihe nkiri kacha amasị m >
< start="221.51" dur="3.87"> Onye bu onye nwe ya. Ee ee. Yabụ na nke ahụ mara mma. Gosi ya >
< start="233.7" dur="3.899"> Enwetara m onye m chere n’ezie chọrọ nyocha nke a ugbu a. A bụ m >
< start="237.6" dur="1.44"> kpọọ otu n’ime bros m. >
< start="242.34" dur="3.16"> Kedu ihe bụ Huncho? Kedu nke na-eme? Ebe ị nọ? >
< start="245.5" dur="2"> Anọ m na studio. Nwoke ị maara na m nọ na ụlọ nyocha. >
< start="248.04" dur="3.92"> Ok, lee, mụ na nwoke mmeri, Masta Fero nọdụrụ n’ebe a. Kedu ihe bụ nwoke? Kedu kwanụ nwanne? >
< start="251.96" dur="2"> Gịnị bụ Quay? Ọ na-aga ike. >
< start="253.96" dur="3.76"> Gị na nnukwu nkịta ugbu a. Kelee mmadụ. >
< start="259.02" dur="3.7"> Mba onye mere ihe a mere, achọrọ m ka ị lelee ya. Ọ na-aga isi ike, n'agbanyeghị eziokwu na-ada ka ihe ị ga-echigharị. >
< start="262.72" dur="3.24"> Anọ m na studio ugbu a, esokwala m. Ọ bụrụ na ọ siri oke ike. >
< start="282.22" dur="7.58"> Kpamkpam na-aga ara. Ọ dịghị nke ahụ siri ike. Ihe ahu nwere ike ime Culture III. >
< start="292" dur="2.98"> Ọ dịghị anyị na ya. Aga m etinye ya ọnụ. >
< start="294.98" dur="4.44"> Ee onye nwe, nwoke. Ekele diri mmeri nke Mkpụrụ Site The Studio Studio S mutum n'ezie. >
< start="299.42" dur="3.74"> Jiri nke ahụ kpọrọ ihe. Gi na nkita di nkpa. Nọgide na-aga, na-egweri. >
< start="303.16" dur="3.8"> Mee uche gị. Nọgide na-esi nri. Gị n'ụzọ. >
< start="307.88" dur="4.14"> Ight Quay. Crazy adịghịdị adị n'ezie. >
< start="318.4" dur="3.28"> Kedụ ụzọ kacha mma onye nrụpụta nwere ike isi nwee ogologo ndụ na ụlọ ọrụ? Dị ka >
< start="321.82" dur="4.71"> onye na-emeputa ụda pụrụ iche dị egwu bụ ihe na-eke ogologo ndụ. >
< start="326.53" dur="4.11"> Eleghị anya ị debanye ndị nrụpụta iri n'ime ebe a, n'ime ụlọ a, ma mechie anya gị >
< start="330.64" dur="4.35"> ma bido igha egwu maka ndị ọrụ iri iri a niile. Ndị ahụ >
< start="334.99" dur="3.87"> ị na-eti Zaytoven ihe ị ga-enwe ike ikwu ozugbo na nwoke ahụ bụ ihe Zaytoven kụrụ. >
< start="338.86" dur="3.09"> Ndi mmadu ajuju: dang Zaytoven ihe m gha eme >
< start="341.95" dur="4.14"> banye na egwuregwu? Know maara ihe ndị ọ dị m mkpa iwere? ”Ana m ekwu nwoke mgbe niile >
< start="346.09" dur="3.57"> ị ga-enweta onye omenkà. Dị ka ọ bụrụ na ọ bụghị maka Gucci ọfụfụ, mgbe ahụ Zaytoven >
< start="349.66" dur="4.65"> ikekwe bụrụ nke na-agaghị enwe isi ihe ọ bụla. Yabụ, ozugbo ị nwetara otu omenkà ihe ahụ >
< start="354.31" dur="4.23"> know marala na Y’all nwetara kemịkalụ na ụda ọnụ, ị maara otu oge ọ ga -ada ma ọ bụ otu oge >
< start="358.54" dur="3.33"> onye na-ese ihe amalite. Ọbụna a ga-amata onye omenkà ahụ >
< start="361.87" dur="3.72"> O doro anya. ọ ga-abụ ụda nke ị mepụtara. Gini mere i ji di elu >
< start="365.59" dur="3.54"> oru ngo a maka nkpuru Site na The Studio Studio Sessions? Ọ na-adị m ka gị >
< start="369.13" dur="3.539"> mara na m bụ onye nrụpụta nke ndị na - emepụta ihe ndị ọzọ na - ele anya na ị maara, na >
< start="372.669" dur="5.671"> lelee anya, ọ na - adịkwa m mgbe niile ka m chọrọ ịbụ onye ndụmọdụ, ị maara ihe m na - ekwu, na >
< start="378.34" dur="4.38"> gosi nkwado maka ndị na - eme ihe na - abịa. Dịka m nọ ebe a nwoke a chọrọ m ịbụ onye ị maara m >
< start="382.72" dur="4.59"> nnukwu bro nye ndi mmadu na acho ime ya na egwuregwu gi. Yabụ oge ọ bụla ihe >
< start="387.31" dur="3.83"> dị ka nke a na-abịa nwoke, M n'ezie na ị maara 100% na. >
< start="391.14" dur="4.22"> Gee ntị na nri ahụ enwere dope, ị nwetara m na ọnọdụ m ịchọrọ ịme ụfọdụ egwu >
< start="395.36" dur="5.72"> nwoke. Ka anyị sie nri. N'ezie. Ka anyị gaa ihe. Ka anyị mee ya. >